Lavaka oliva ho loharanom-angovo ho an'ny hotely | Fanavaozana maintso
Isan'ireo angovo azo havaozina no ahitantsika ny biomassa. Ny vato oliva dia mety ho solika mamokatra angovo avy amin'ny biomassa. Tahaka izany ny fahombiazany amin'ny famokarana angovo ka ny trano fandraisam-bahiny mitady hamonjy herinaratra sy hampiorina ny tenany amin'ny taonjato faha-XNUMX miaraka amin'ny fahombiazan'ny angovo lehibe kokoa ary ny fiononana tsara no mitady izany.
Mba hananana trano fandraisam-bahiny manana kalitao tsara, tsy tokony hanolotra fotodrafitrasa tsara fotsiny izy ireo fa koa fanoloran-tena hikarakara sy hitahiry ny tontolo iainana sy ny faharetan'ny angovo. Mba hanaovana izany, ny trano fandraisam-bahiny dia tsy maintsy mampihena ny dian-tongotr'izy ireo araka izay azo atao.
Trano fandraisam-bahiny ara-tontolo iainana
Ny trano fandraisam-bahiny izay mitady hanatsara ny kalitao sy manolotra fizahan-tany tsara dia mifidy gastronomy vita amin'ny vokatra eo an-toerana izay manampy amin'ny fampihenana ny dian-tany ara-tontolo iainana. Raha tsy mila fonosana na fitaterana be ny lovia aroso any amin'ny hotely, Hampihena ny fivoahana CO2 amin'ny rivotra isika ary hampihenana ny habetsaky ny fako vokarintsika. Ho fanampin'izany, mampiroborobo ny varotra eo an-toerana izahay ary mampiroborobo ny toekarena eo an-toerana.
Ho an'ny famokarana angovo ao amin'ny hotely, ny vato oliva dia ampiasaina ho solika satria manana toetra tena tsara izy io noho ny hakitroky ny haavony, ny hamandoana manodidina ny 15% ary ny sandan'ny kaloria. Ny famokarana angovo azo havaozina amin'ny alàlan'ny fampiasana oliva ho solika dia miteraka fihenan'ny fihenan'ny diesel, propane na gazy voajanahary, izay lafo kokoa sy mandoto.
Ny hôtely dia mety hanana orinasa biomassa izay manana silo amin'ny tany izay ametrahana taolana maina sy torotoro manodidina ny 40.000 kilao. Raha vantany vao voaomana ireo taolana ireo dia mandeha mekanika amin'ireo vata roa izy ireo izay mamokatra angovo amin'ny fampiasana ny taolana ho solika.
Amin'izany fomba izany dia hiteraka angovo azo havaozina mandray anjara amin'ny mampihena ny famoahana CO80 amin'ny 2% ary ny vidin'ny angovo 45% amin'ny alàlan'ny fanoloana lasantsy amin'ny fandoroana taolana amin'ny rano fanadiovana, ny fanafanana ary ny dobo filomanosana mafana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny lavaka oliva dia loharanom-angovo ho an'ny hotely
Salama, mety mahita fanontaniana ianao, ho solika na ho fitaovana ho an'ny digester?